ISiphepho u-Irma siyaqhubeka nokuya eNyakatho Florida, isigaba saso sehlela ku-1 | Isimo Sezulu Senethiwekhi
U-Irma lapho edlula eFlorida njengamanje
Imizi enezikhukhula, izindlu ezingaphezu kuka-3 million ezingenawo ugesi kanye nomonakalo omningi, umzila iSiphepho u-Irma esiwushiye endleleni yawo. Okwamanje sehliselwe esigabeni 1, imimoya yayo iyaqhubeka nokuba ngaphezu kuka-150km / h, futhi isengxenyeni esenyakatho yeSifundazwe saseFlorida kuphela.
Emahoreni ambalwa alandelayo, i-Irma kulindeleke ukuthi iqhubeke nokuqhubekela phambili ohlangothini olusentshonalanga yeFlorida, njalo ibheke eNyakatho. Kulindeleke ukuthi lapho-ke izokhukhumeza iye eningizimu-mpumalanga ye-United States, lapho izophinde ilahlekelwe ngamandla. Uma iso lesiphepho selisendaweni eseningizimu yeGeorgia noma lisesendaweni esenyakatho yeSifundazwe saseFlorida kulindeleke ukuthi kuqhubeke isikhashana, kepha kube isiphepho esishisayo.
Imiphumela ekuvukeni kwayo
Abantu abangenawo ugesi esifundazweni saseFlorida bamele ama-35% esamba yamakhasimende abhalisele insiza kagesi. Ezifundeni, abantu abangasebenzi kakhulu IMonroe, ngokusikeka ezindaweni ezingama-83%. Miami-Dade, ezinye zezindawo ezishisa kakhulu lapho i-Irma izodlula khona, ishiya u-81% ngaphandle kwamandla, isifunda esinabantu abaningi eFlorida. URobert Gould, iphini likamongameli wenye yezinkampani ezisetshenziswayo, uthi kuzothatha amasonto ukubuyisa nokulungisa zonke izintambo zikagesi.
Ukuhlolwa okuthembekile komonakalo odalekile kulindeleke namuhla. Bekungenziwa phambilini ngenxa yokwehluleka kwamathimba ezokutakula ukusondela kule ndawo. Kungenzeka ukuthi inani lezinto ezibonakalayo nezomuntu zingakhuphuka. Kuzokwazi ukuqinisekisa uma isiphepho sesidlule ngokuphelele. Isibalo sabantu abashonile eFlorida manje sesimi kwabathathu, sinezela abangama-3 ekudlulisweni kwabo bedabula iCaribbean.
UTrump usayine isimemezelo senhlekelele enkulu eFlorida, uyakuqinisekisa ukuthi uzovakashela le ndawo kungekudala.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Iziphepho » ISiphepho u-Irma siyaqhubeka nokudlulela eNyakatho Florida, isigaba saso sehlela ku-1